Ucikwa ngabanikelela ukubukwa ngosizi lwabakhahlamezekile
OWAYELINGISA kwiSibaya, u-Ayanda Borotho, ukhuza abafuna ukubukwa ngabakhahlamezwe yizikhukhula eKZN Isithombe:ESIGCINIWE
Charles Khuzwayo | April 24, 2022
OWAYENGUMLINGISI weSibaya, u-Ayanda Ngubane-Borotho, ukhwele wadilika kubantu abanikelela ukubukwa ngezimpahla abasuke bezimukeza abantu baKwaZulu-Natal abakhahlamezwe yizikhukhula. U-Ayanda, owayelingisa indawo kaPhumelele Zungu, ubhale kanje ekhasini lakhe le-Instagram.
Lo mlingisi odabuka eMpangeni, ululeke abanikelayo ukuba bashuthe izithombe zezimpahla abafika nazo kuphela hhayi nabantu abahlulumezekile.
U-Ayanda ubhale wathi:"Abantu basiza nanganoma yini. IKZN ikhahlamezekile kulesi sibhicongo. Konakele bakithi. Esikubona ezindabeni akulutho. Nakuba kunjalo ngiyacela siyeke ukufaka abantu abakhahlamezekile ezinkundleni zokuxhumana. Veza kuphela umonakalo, hhayi abantu. Lento ayikho ngawe kodwa ingabantu abakhahlamezekile. Veza okwenzayo, izijumbane zokudla nezingubo zokulala."
Uthe lokho akuvezwe ukukhuthaza abanye ukuba banikele futhi baqongelele uxhaso.
"Akukuhle ukuveza izithombe zomsamo lapho kubekwe khona izingubo zezingane nezamalungu omndeni, abesifazane abazilile komatilasi. Yini nje leyo? Nenzani ngempela? Sikuphi nje isithunzi kulokho? Abantu balahlekelwe yikho konke manje senibaphuca isithunzi ukuze nifake ezinkundleni zokuxhumana."
U-Ayanda uthe baningi abantu asebenikelile kodwa abangazihluphanga ngokuvela kumakhamera.
"Abenzeli ukubukwa abakhahlamezekile. Abantu bangempela, ngakho yekelani ukudlala ngezimpilo zangempela nenzela lezi ezingelona iqiniso zasezinkundleni zokuxhumana."
Unxuse abantu abantu abasazonikela ukuba bakwenze lokho ngenhlonipho, ngisho ngabe umuntu ukuliphi izinga empilweni nasemphakathini.